Suubban: Ku Bilow Adeeggaaga Sanduuqa Rakibista ah Qalabkaan Ecommerce
Isniin, April 19, 2021 Isniin, April 19, 2021 Douglas Karr
Mid ka mid ah xanaaqa weyn ee aan ku aragno ganacsiga ayaa ah bixinta sanduuqa rukunka. Sanduuqyada macmiilku waa soojeedin xiiso leh… laga bilaabo xirmooyinka cuntada, alaabada waxbarashada carruurta, ilaa daaweynta eyga… tobanaan milyan oo macaamiil ah ayaa iska qortay sanduuqyada rukunka. Ku habboonaanta, shaqsiyeynta, ugubnimada, layaabka, gaar ahaaneed, iyo qiimaha ayaa ah sifooyinka oo dhan oo keenaya iibinta sanduuqa rukunka. Ganacsiyada ecommerce ee hal-abuurka leh, sanduuqyada rukunka ayaa faa'iido u noqon kara maxaa yeelay waxaad hal-mar wax-iibsadeyaasha uga dhigtaa macaamiil soo noqnoqota. Suuqa eCommerce wuxuu u qalmaa
Moosend: Dhammaan Astaamooyinka Qalabaynta Suuqgeynta Si Loo Dhiso, Tijaabo, Loola socdo, loona Kobciyo Meheraddaada
Mid ka mid ah dhinacyada xiisaha leh ee warshadayda ayaa ah hal-abuurnimada sii socota iyo hoos u dhaca qiimaha leh ee istiraatiijiyadaha is-gaarsiinta suuqgeynta heer sare ah. Meeshii ganacsiyadu markii hore ku bixiyeen boqollaal kun oo doolar (walina ku sameeyaan) barnaamijyada waawayn… hadda kharashyadu si weyn ayey hoos ugu dhaceen halka astaamaha ay sii wadaan inay sii fiicnaadaan. Waxaan dhowaan la shaqeyneynay shirkad fulineysa moodada shirkadda oo diyaar u ahayd inay saxiixdo qandaraas madal ay ku kacayso in ka badan nus milyan milyan
Shaki kuma jiro gaadhista fog ee Hubspot oo ah CRM iyo madal otomaatig suuq geyn ah iyo WordPress oo ah Nidaamka Maareynta Mawduucyada. Sababtoo ah waa shey fudud oo wax lagu daro, WooCommerce waxay ku sii kordheysay caan ka ahaanta madal ecommerce si fudud loo hirgeliyo. In kasta oo WordPress ay sii deysay CRM-keeda gaarka ah, madalku wuxuu ka maqan yahay qaan-gaarnimada Hubspot awooddeeda ay ku waddo geeddi-socodka hanashada iyo istiraatiijiyadda hay'ad. Isku xidhka Hubspot ee la awoodi karo ee
Waxaa jira tan aad u adag oo leh ecommerce - laga bilaabo habka lacag bixinta, saadka, fulinta, illaa xamuulka iyo soo celinta - in shirkadaha badankood ay dhayalsadaan markay ganacsigooda ku qaataan internetka. Rariddu waa, laga yaabee, mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee wax iibsasho kasta oo internetka ah - oo ay ku jiraan kharashka, qiyaasta taariikhda bixinta, iyo raadinta. Kharashaadka dheeraadka ah ee rarida, canshuuraha, iyo khidmadaha ayaa mas'uul ka ahaa kalabar dhammaan gawaarida wax iibsiga laga tagay. Gaarsiinta qunyar socodka ah ayaa mas'uul ka ahayd 18% dukaamaysiga laga tagay